Antigua iyo Barbuda Muwaadinimada Rendezvous Bay Share
Iibinta qayb ka mid ah dhismaha si loo helo Jinsiyadda Antigua iyo Barbuda
Kooxda Rendezvous Bay ayaa si iskaashi ah kula shaqeyneysa si aad uga dhisto gurigaaga jasiirad gaar ah mid ka mid ah jardiinooyinka qaran ee ugu quruxda badan adduunka.
Xeerarka naqshadeynta Rendezvous Bay waxaa loogu talagalay in lagu fududeeyo naqshadaha isku dhafan dabeecadda iyo jawiga dhismaha. Muuqaallo qurux badan iyo neecawda kulaylaha waxay muujinayaan meelaha bannaanka lagu nool yahay, halka bilicsanaanta hadda jirta ay tahay dabacsan, dabiici ah, aan waqti lahayn.
Iyada oo leh cufnaan dhisme oo hooseeya oo loogu talagalay raaxada asturnaanta, guri kasta oo ku yaal Rendezvous Bay wuxuu noqon doonaa dhuumasho gaar ah. Qawaaniinta naqshadeynta ee u baahan meelaha jaban iyo meelaynta dhismaha ee jawaabta leh ayaa qoyska iyo saaxiibbada ku maaweelin doonta, sidoo kale waxay ku helayaan nasasho iyo hoyga guri kasta dhexdiisa.
Guri iibsade wuxuu adeegsan karaa mid ka mid ah naqshadaha caadada u ah Rendezvous Bay, wuxuu abuuri karaa nooc caado ah, ama wuxuu qaabeyn karaa gurigooda, isagoo si toos ah ula shaqeynaya naqshadaha Rendezvous Bay ama naqshadeeyaha naqshadeynta. Mashruucyadu waa inay u hoggaansamaan jihada guud iyo qaab dhismeedka jasiiradda sida lagu soo bandhigay Xeerarka Xakamaynta Naqshadaynta ee Rendezvous Bay oo ay oggolaadeen Kooxda Dib-u-eegista Naqshadeynta. Waxaad la shaqeyn kartaa naqshadayaasha gudaha ama kuwa caalamiga ah ee aad dooratay. Waxaan kaa caawin karnaa sameynta kooxdaada hal abuurka ah waxaanan si dhow ula shaqeyn doonaa guryahaaga.
Beesha Rendezvous Bay waxaa maamuli doona qawaaniin dhowr ah oo loo yaqaan Bylaws Association Community iyo iyada oo loo marayo Golaha Maamulka Ururka Bulshada, oo matali doona daneeyayaasha bulshada. Dukumintigan faahfaahsan waxaa ku jira tilmaamaha naqshadeynta, qaabdhismeedka iyo maamulka, xeerarka xakamaynta naqshadeynta, xaddidaadda dhismaha iyo isticmaalka waddooyinka, kharashyada guud, iyo macluumaadka Ururka Milkiilayaasha Guryaha.
Muuqaallo qurux badan iyo neecawda kulaylaha waxay muujinayaan meelaha lagu nool yahay ee bannaanka, halka bilicsanaanta hadda jirta ay tahay mid deggan, dabiici ah, oo aan waqti lahayn.
Kooxda dhismaha ee Rendezvous Bay ayaa mas'uul ka noqon doonta rarida guri kasta. Shaqaalaha miisaaniyadda, kooxdu waxay si toos ah ula shaqeyn doontaa macmiilka ama xirfadlayaal loo qoondeeyey iyada oo loo marayo habka naqshadeynta si loo abuuro qorshaha dhismaha ee ugu dambeeya.
Kooxda Rendezvous Bay ayaa dusha kala socon doonta dhamaan dhismaha qandaraasleyda maxalliga ah si tartan ah waxayna macaamiisha siin doontaa dammaanad dhisme. Adeegyada naqshadeynta sharciga iyo gudaha waxaa sidoo kale bixin kara shaqaalaha Rendezvous Bay, ama, sida naqshadeynta guriga, kooxdu waxay la shaqeyn kartaa xirfadlayaal dhinac saddexaad ah oo loo qoondeeyay adeegyadan si ay u gaarsiiyaan macmiil kasta guri dhameystiran oo qalabaysan.
Jinsiyadda Antigua iyo Barbuda RUS
Antigua iyo Barbuda Jinsiyadda ENG
Ku laabo Muwaadinimada Real Estate